Famalifaliana noho ny fety :: Fianakaviana maro notoloran’ ny vondrona Filatex kojakoja samihafa • AoRaha
Famalifaliana noho ny fety Fianakaviana maro notoloran’ ny vondrona Filatex kojakoja samihafa
Tsy namela handalo fotsiny an’izao fankalazana ny Fetim-pirenena izao ny vondrona Filatex fa nisy ny fanomezana kojakoja isan-karazany nataony tamin’ny toerana maro teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Nahazo anjara ny zokiolona sy ankizy ary fianakaviana sahirana, toy ny teny Talatamaty, omaly.
Bodofotsy firakotra, vary, menaka, labozia, bisky, vatomamy, siramamy, savony, ary kilalao no natokan’ity vondrona ity tamin’ny fanampiana an’ireo sokajin’olona ireo. Nisy ihany koa ny hetsika fanaovana famorana faobe amin’izao vanim-potoanan’ny ririnina izao.
Nampivondrona olona manodidina ny dimanjato sy arivo kosa ny fiaraha-misakafo nanamarihana ny nofon-kena mitam-pihavanana noho ny fahatongavan’ny asaramanitra, teny Talatamaty. Hitohy amin’ny faritra hafa izao hetsika izao, toy ny eny Ankadimbahoaka sy Masay, ankoatra ny fizaràna vary sy menaka ary vatomamy sy arendrina nataon’ny
vondrona Filatex tamin’ny fokontany samihafa.
Fiaraha-miasa :: Hampita mivantana ny CAN ny “Orange Madagascar”
Misaona ny asa fanaovan-gazety :: Nodimandry i Jean Tridor Fred Rasamoely